Kumanikidza Tricks Kubva Semalt - Nzira Yokudzivirira Sei Google Analytics Referral Spam
Kuendesa mberi kweGoogle Analytics kwave kunowanzozivikanwa mumwedzi ichangopfuura nekuda kwemigumisiro yaro yakaipa. Icho chinokwanisa kukanganisa nzvimbo dzako nehutano hwavo mukati memaminitsi. Kuendeswa kunotsvaga kunowanzoitika apo webhusaiti yako inowana huwandu hwakawanda hits fake uye spam bots. Iwe unganzwa kuti izvozvi zvinokodzera kugona, asi ivo havakwanisi - via lactea fotos reales. Kutarisa kweGoogle Analytics spam chimwe chinhu chaunoda kubhadhara nguva pfupi. Ichaita kuti nzvimbo yako ive nemigwagwa yakawanda, asi izvozvo hazvina maturo uye zvinogona kutungamirira Google kudzivisa AdSense yako. Hazvizokubvumi kuti uwane mari paIndaneti semutengesi kana bhizinesi.
Frank Abagnale, mumwe wevatungamiri vekutungamirira Semalt , anorondedzera zvimwe zvakavanzika zvekutumira spam kudzivirira.
Tarisa Google Analytics yako zuva nezuva
Zvakakosha kuongorora Google Analytics uye kugadzirira mharidzo yako zuva rega rega. Kana zviwanikwa zvako zvichiita kunge zvisingazivikanwe kana iwe unonzwa kuti nzvimbo yako yakange iri kugamuchira zvisiri izvo, iyi ndiyo nguva yekutora matanho. Kana nzvimbo yako inogamuchira zvisiri izvo, iwe unofanira kufunga kuvhara Google Analytics kutumira spam uye yese iyo IPs kubva pane idzi zvirongwa zvekutumira zvauya. Vanhu vanofambisa mawebhusayithi akadaro vanoziva matanho ekutora ma URL avo kuratidzira pane data yako yeGoogle Analytics. Vanoshandisa nzira dzakasiyana-siyana nekuda kwechinangwa ichi, chinobva pakushata kunonyengera..Kazhinji kacho, chinangwa chavo ndechokuita nzvimbo yako yekufambisa kushanyira uye motokari iyo chinhu chaunofunga kuti chakanaka. Kubva pane zvinyorwa zvavo, vangave vakuvadza nzvimbo yako uye vhura zvinyorwa zvayo. Imwe yenzira dziri nyore kuti uzvibvise ndeyokubvumira makiki ako. Isa ma cookies panzvimbo yako uye nguva dzose uwane ruzivo kubva kuvashandisi, mapurogiramu avo, uye maitiro avo pose pavanoshanyira nzvimbo yako.
Kunyange pavanotarisa zvakakodzera uye vakavimbika, vachikubatsira kuti uuye peji yekutanga yeGoogle, haufaniri kuvimba navo uye nemigumisiro yavo. Vachakupa mazano chaiwo uye vachakumbira kuti uise zvinyorwa izvi pawebsite yako. Kuramba kubva kune mazano ose uye mazano anokosha.
Nzira yekusvina kunze kweGoogle Analytics Referral Spam
Kuiswa patsva kweGoogle Analytics kutumira spam kunogona kuitwa kana iwe ukavhara nzvimbo idzi dzose: monetizationking, rank-checker, cookie-law-enforcement, law-enforcement-check, social-buttons, fix-website-error, keywords -monitoring-kubudirira, free-video-tool, magicdiet, ownshop, site-auditor, nezvimwe.
Mashoko akanaka ndeokuti iwe unogona kudzivisa kutumira spam nguva dzose. Iwe unogonawo kugadzirisa zvirongwa zvako kuti udzivise kusvika kwavo munguva yemberi. Rega ini pano ndikuudze iwe kuti vazhinji vekutumira spam hakushanyi nzvimbo yako. Zvechokwadi, iyo inzira yekunyengera AdSense yako neGoogle Analytics. Iko kushanyira mweya kunoreva kuti site yako haigamuchiri vanhu chaivo kuverenga nekutsvaga zvaunenge uchiverenga. Nokudaro, inogona kuchinja zvikamu zvako zvose, nguva pawebsite, kubhadhara kutengesa uye kutendeuka. Kuwanda kwevatenzi vepanzvimbo vanotenda kuti Google Analytics kutumira spam inoshandiswa-kushandiswa, asi haisi chaizvo. Inokonzera mazana kuzviuru zvewebsite mazuva ose, uye hapana nzira yekurasikirwa nayo nezvose. Zvaunogona kuita ndezvokuvhara ma IPs uye kuumba mafaira. Google yakapa vashandisi vayo nevashanduri vashanduri vanonzi Measurement Protocol. Iwe unogona kushandisa shanduri iyi kuti uone kana site yako iri kuwana mvumo yakarurama kana kwete.